အကောင်းဆုံး ZL-D001 ABS အရေးပေါ်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | DSC
Test Reagent သည်
တစ်ခါသုံး VTM ပြွန်
ZL-D001 ABS အရေးပေါ်ယာဉ်
Product Functions အလိုက်အမျိုးအစားခွဲပါ
Dry Fluorescence Immunoassay Analyzer ဖြစ်သည်
ကြိမ်နှုန်းမြင့် C-arm X-Ray စက်
အဓိကအားဖြင့်အလူမီနီယံဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သံမဏိ၊ ABS အင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပလပ်စတစ်သံမဏိတိုင်လေးတိုင်ပါ ၀ င်သည်။
၁။ စောင်းထားသော dovetail လက်ကိုင်၊ တစ်ခါသုံးဖွဲ့စည်းထားသောလက်တန်းစားပွဲ၊ ပိုမိုသန့်ရှင်းချောမွေ့စွာ သုံး၍ ပိုလှပသည်။
၂။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသည်အဆင့်မြင့်အထူ၊ ပေါ့ပါး၊ ခိုင်ခံ့ပြီးတာရှည်ခံသည်
၃။ Universal အသံတိတ်ခြေနင်းဘရိတ်၊ ဆန့်ကျင်လမ်းချော်မှုနှင့် ၀ န်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ caster ပစ္စည်းသည်မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိ polyurethane၊ အငြိမ်မနေ၊ ဆံပင်အကွေ့အကောက်များသော၊ ရွှေ့ရလွယ်ကူပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုဆေးရုံအဆင့်တိကျမှုဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တင်သွင်းထားသော ABS အင်ဂျင်နီယာပလပ်စတစ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ကြိမ်တည်းရွေးချယ်သည်။ ၎င်းသည်တာရှည်ခံ၊ လှပပြီး texture ကြွယ်ဝသော၊ corrosion ခံနိုင်ရည်၊ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းပိုရှည်သည်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားသည်။
1. အဓိကအားဖြင့်အလူမီနီယမ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သံမဏိ၊ ABS အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပလပ်စတစ်သံမဏိတိုင်လေးတိုင်၊
၂. ABS ပေါင်းစပ်ထားသော guardrail ၇၅ မီလီမီတာတွင်သုံးဖက်တွင်ကွာဟချက်မရှိပါ။ စားပွဲထိပ်တွင် guardrail injection molding လုပ်ငန်းစဉ်ပါ ၀ င်သည် လက်တန်းနှစ်ခုစလုံးတွင် recessed ဒီဇိုင်းသည်ပစ္စည်းများချော်လဲခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ရပ်ထားသောစားပွဲခုံ၏အသုံးပြုမှုဧရိယာ: ၆၂၀*၄၃၀*၆၀ ～ ၇၅ မီလီမီတာစားပွဲ ပွင့်လင်းသောနူးညံ့သောဖန်သားဖြင့်
၃။ ရှေ့၊ ဗဟိုအံဆွဲ၊ အံဆွဲ ၈ ခု၊ ပထမနှင့်ဒုတိယအလွှာ ၈၀ မီလီမီတာ၊ အတွင်းနေရာ၊
508*358*68mm*ဗဟိုအံဆွဲနှစ်ခု 120mm အတွင်းနေရာ: 508*358*110mm*နက်ရှိုင်းသောအံဆွဲ 240mm အတွင်းပိုင်းနေရာ: 508*358*220mm အံဆွဲများနှင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခွဲနိုင်သော 3*3 dividers များ။ *အံဆွဲလက်ကိုင်များသည်အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သောပုံစံများ၊ တံဆိပ်ခတ်ထားသောအပေါက်အမျိုးအစားတံဆိပ်ပြားအရွယ်အစား ၁၄၈*၃၈ မီလီမီတာ၊ အရည်နှင့်ဖုန်မှုန့်များ ၀ င်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ပါ၊ အခြားဘက်မှအရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ label-type area ကို လိုက်၍ ဒီဇိုင်းထုတ်သည် ergonomic နိယာမအရ slot အမျိုးအစားသည်စောင့်ဆိုင်းရန်နှင့်ကြည့်ရန်လွယ်ကူစေရန်အပေါ်ဘက်သို့စောင်းထားပြီးအတွင်းပုံစံခွက်၏လက်ကိုင်သည် ထူလာပြီးပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
၄။ ဘယ်ဘက်၊ defibrillation platform၊ ဖုံးကွယ်ထားသော telescopic အလုပ်စားပွဲ၊ အပျက်အစီးသေတ္တာ၊ ပိုက်ခြင်းတောင်း၊
၅။ ညာဘက်တွင်ခြင်းတောင်း၌နှစ်လီတာသုံးသံသေတ္တာနှစ်လုံးပါ ၀ င်သောအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းပြုတ်ရည်ခုံနှင့် ABS နှစ်ထပ်တပ်ဆင်ထားသည်။ အရောင်ခွဲခြားရန်ဖုန်စည်များ၊
၆။ နောက်ဘက်: နှလုံးအကူစက်၊ ဖုံးကွယ်ထားသောမှန်ပြောင်းအောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါကိုင်၊ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ၅ မီတာပါဝါကြိုး၊
၇။ အောက်ခြေ: ဇိမ်ခံ universal plug-in အသံတိတ်ဘီးများ၊ ဘရိတ်လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုပါသော casters များသည်အစွမ်းထက် polyurethane ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Anti-static, anti-hair entanglement, ပေါ့ပါးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လှုပ်ရှားမှု၊
ယခင်: ZL-C001 လျှပ်စစ်မီးယပ်စာမေးပွဲကုတင်
နောက်တစ်ခု: ZL-D002 ABS Dispensing ထရပ်ကား
(COVID-19) IgM/IgG Test Kit (Dry Fluorescence ...
ZL-E002 ABS ခုတင်ဘေးစားပွဲ
ပြုတ်ရည်စုပ်စက် BYS-820 စီးရီး
နည်းပညာ (သို့) အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်
လိပ်စာ အဆောက်အ ဦး ၁၃၈၈၈၊ HuminRoad၊ ရှန်ဟိုင်း
dashuncome သည် sh